Ake sizame ukuqinisekisa ukuthi isobho recipe ushizi nge inkukhu uyakwazi ngempela ukuncintisana for ubuqhawe nge enjalo "ebusika", ie ukujula eqotho izitsha yokuqala like isobho, borscht, rassolnik futhi halophytes. Ngoba akukho ngaphansi ocebile, futhi kwabaningi okumnandi okuningi. Ngaphezu kwalokho, umpheki ushizi isobho kuyinto lula kunalokho, mhlawumbe nje, hodgepodge, kuyoba eshibhile futhi ithatha isikhathi esincane. Isihloko inikeza iresiphi ushizi isobho nge inkukhu, lapho isakhi esiyinhloko - ushizi kanzima. ushizi Kodwa ingasetshenziswa futhi lusetshenziswe, kukhona ekhethekile - isobho, zitholakale nge izithasiselo ezahlukene.
Recipe ushizi isobho nge inkukhu
Silungiselela inqubo, noma yiziphi izinto esizidingela
Inkukhu webele, ezimbili amalitha amanzi ethafeni, amalitha eyodwa nengxenye yamanzi elicwengekileyo, onion, isanqante, amazambane amabili noma amathathu, amagremu amakhulu amabili ushizi like "weparmesan", dill kancane kanye parsley. Yilokho konke idinga isobho kadokotela Ukudla.
Thina ukufinyelela webele inkukhu phezu kwamathambo. Akubalulekile eneqhwa. Pheka efanele kakhulu ekudleni isobho.
Ngemuva kwemizuzu engu-ezinhlanu asebenzayo abilayo umhluzi uhlangane ngqo echibini, ugeze webele, uthele amanzi abandayo elicwengekileyo, unezela usawoti, lihlanjululwe isibani amancane wonke isanqante eluhlaza. Letha ngamathumba bese uqhubeke ukuphela imizuzu cishe abangamashumi amabili ngesikhathi umlilo omncane. Yini thina kuqala wathela umhluzi? Ake nje ukusho ukuthi singakhonzi kuphela umhluzi elachithwa, naye gone amaningi izinto ezimbi inkukhu lokuthi uyaphila, pecked, waphuza kwaba ngesimo imijovo. Umhluzi lokhu akusho sezizimbi kakhulu ukunambitheka, ukuphendulela ke. Isaziso amagwebu phezu umhluzi is hhayi kwakhiwa, akudingekile ukuba ame ngesipuni slotted!
Okulandelayo - sizothatha kuyo le anyanisi kanye izaqathe, provernom in a blender kanye dill kanye parsley. Ikhasi amazambane ambalwa, ngeke uthathe izingcezu ezimbili noma ezine bese upheka nabo umhluzi kuze ithenda. Sizobuyela amazambane kanye inkukhu webele, asuse amathambo futhi provernom inyama in a blender. Amazambane ungavele bahlanganise.
Futhi iyawashiya umhluzi yashizi on a grater ushizi esihle kanzima kusukela amane nanhlanu ngalinye lokucuketfwe fat isenti futhi, ibangele njalo, elinde lapho kuyoba chaza benganakwa muntu. Buyela umhluzi zonke thina pyurirovali, futhi ubilise, cisha, eduze imizuzu eyishumi nanhlanu. Manje - etafuleni!
Kanjani lezi imizuzu eyishumi nanhlanu hhayi ukuba kuminyanise ngamathe
Lungiselela croutons! Sika izikwele isinkwa noma izinhliziyo, akuqede a clove ambalwa garlic ne usawoti kancane, pepper kanye namakhambi omisiwe, bahlanganise ingxube nabaningana wezipuni zamafutha yemifino kanye roll in isinkwa sakhe. Manje yokosela it kuhhavini. croutons lakho nje uzolunga uma Uthwale njengezingubo zokulala etafuleni. Sithemba ukuthi ugcwalise i zokupheka zakho nge inkukhu isobho. Izithombe kwesitolo sabo - ngakho ngokuvamile wena ukupheka!
Ushizi isobho nge ubhiya
E-West, efana ushizi isobho ngokuvamile kakhulu uzilungiselele ubisi noma ukhilimu ngesigamu nge ubhiya ukukhanya. Ngu izici ongaziwa abazi ukunambitha munyu, kunzima ukubona izimpawu wophuzo Potion e ukungaguquguquki esithambile. Mhlawumbe kungcono iqiniso lokuthi utshwala iyasha lapho evuthayo. Beer kuphela badinga ukukhanya. Kanti inikeza iresiphi for the isobho ushizi yenkukhu kanye ubhekeni.
abangamakhulu amabili amagremu kanzima ushizi "Gouda" noma "Cheddar" inkukhu webele, isigamu iphawundi ubhekeni, isipuni kafulawa, spoon ibhotela, isigamu ilitha ukhilimu, onion, usawoti, pepper, amakinati, aphuze ingilazi kabhiya ukukhanya.
Bilisa umhluzi kusukela inkukhu webele. Pheka ke kwesokudla - abakhwabanisi ngowokuqala! Sidinga umhluzi, futhi inkukhu webele kungenzeka ukunikela neyesibili, niyilungise, isibonelo, Fig. Nakuba umhluzi iphekwe, uyoba nesikhathi usike onion, wagcoba on inhlawulo grater shizi ubhekeni oqoshiwe.
Thosa ubhekeni, ukususa cracklings - futhi singaba usizo kabi. Beka epanini, lapho okugazingiwe ubhekeni, ibhotela, Fry anyanisi oqotshiwe. Engeza ufulawa ukuphuca ke we ukunambitheka eluhlaza ngu ukuthosa endaweni amafutha anephunga elimnandi. Ufulawa zizoshintsha hhayi kuphela ukunambitheka, kodwa futhi umbala. Lapha ke uthele umhluzi ku pan (uzodinga izinkomishi ezimbili kuya kwemithathu) izingxenyana ezincane, ibangele ngokucophelela. Manje abayiswe isobho yakhe ebhodweni, epanini ukuthosa ngoba cha zululeka. Lapho amathumba futhi, uthele ukhilimu. Ngokushesha ukwenqaba ilangabi ukuze ngokulambisa abilayo. Ushizi yashizi is batheleka pan izingxenye, ibangele kuze nokonakala ephelele. Yafika ngesikhathi sokutjhuguluka ubhiya. Thela it singene isobho ngaphandle ukuzisola! Kukhona kakhulu - usawoti, amakinati kanye pepper. Pokipit imizuzu emihlanu kuya eziyisikhombisa ukuhwamuka utshwala, futhi kungenziwa wapha, wafaka isitsha ngasinye croutons, cracklings futhi izingcezu ezincane abilisiwe inkukhu webele. Imifino nakho kungaba - yimuphi. Bon appétit!
Fritters of broccoli: ukunconywa futhi esihlwabusayo
Holiday nesitsha kwansuku - izinhlanzi ekuhlolweni.
Seyogathi izimbiza e multivarka. Indlela ukupheka yogurt: iresiphi
Allusion - kuyinto efanele kuleli zwe lanamuhla?
Ukwakhela phezu kwasiphi eside sokukhulelwa ultrasound imibukiso?
Makalale Genichesk - ukuzilibazisa isikhungo "Era", "Express", "Gingerbread Man", "Coral"
Ibanga ngokhonkolo, ingxenye ukhonkolo. Ukusetshenziswa ukhonkolo
Yiqiniso steroid Wabasaqalayo
Singers Popular we 90. Russian. Uhlu nabadlali phezulu esidlule.
Jelly amagilebhisi. Indlela apheke amagilebhisi jelly: iresiphi